Beta agafeela, Sonos na-ekwupụta mmekorita ya na Apple Music | Esi m mac
Disemba 2015 ụlọ ọrụ Sonos bidoro beta ọhaneze iji Apple Music ya na ndị na-ekwu okwu okwu dị ka ọrụ jikọtara n'ime ya, agbanyeghị ọ bụghị ruo taa mgbe anyị matara na ụlọ ọrụ ahụ kwadoro mmekọrịta ya na Apple Music n'èzí mmemme beta.
N'ọnọdụ ụfọdụ, ndị ọrụ ekwuola na iji Apple Music site na Sonos Controller dị mma karịa ngwa ọdịnala n'onwe ya. Apple VP nke Apple Software na Ọrụ Eddy Cue, ekwenye na ọ bụ nnukwu Sonos fan, ekwuola ọbụna "Anyị echerela nke a ogologo oge [...] Apple nwere ọkwa dị elu n'ụdị njikọta a".
Kpọmkwem, e mepụtara ngwa Sonos Controller ka ị nwee ike ịnweta atụmatụ dị iche iche nke Apple Music dị ka ngalaba nke Maka Gị, Ọhụrụ, Redio na egwu m, dị ka ọ na-eme ihe atụ na iTunes ma ọ bụ ngwa Music na iOS.
Na mgbakwunye na nke a ngwa nwekwara ndakọrịta na Gbagwojuru redio 1, tinyekwara ọdụ redio ndị ọzọ dị ugbu a na ndị ọdịniihu enwere ike ịmalite na ikpo okwu a.
Maka ndị gị na-amaghị Sonos, ụlọ ọrụ na-enye Ndepụta zuru ezu nke ndị ọkà okwu na ikike jikọọ na ịntanetị na nke ahụ na-enye ohere ịmepe usoro ọdịyo zuru ezu maka ụlọ.
Na mgbakwunye na nkwado Apple Music, Sonos dakọtara na Spotify, Pandora, Amazon Prime, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ n'ịzụrụ otu n'ime ndị okwu a, ị ga-enweta "Tinye ọrụ ọrụ egwu" site na ngwa Sonos Controller gụnyere Apple Music, ebe ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ ọhụụ nke ikpo okwu a ị ga-enwe Ndenye ọnwa 3 maka ọrụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Beta agafeela, Sonos na-ekwupụta mmekọrịta ya na Apple Music
Apple na-echetara ndị mmepe ka ha wụnye akwụkwọ ọhụrụ na February 14